MetaCX: Tantano ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny varotra mifototra amin'ny vokatra | Martech Zone
Nandritra ny folo taona lasa izay, niara-niasa tamina talenta tsy mampino tao amin'ny indostrian'ny SaaS aho - anisan'izany ny niasa ho mpitantana ny vokatra ho an'i Scott McCorkle sy ny taona maro ho mpanolo-tsaina mpanambatra miasa miaraka amin'i Dave Duke. Scott dia mpanavao tsy an-kijanona afaka niatrika fanamby rehetra. Dave dia mpitantana kaonty miovaova tsy tapaka izay nanampy ireo fikambanana lehibe indrindra manerantany mba hahazoana antoka fa nihoatra ny fanantenany.
Tsy mahagaga raha niara-niasa izy roa, nandinika ny fahasahiranana amin'ny varotra B2B, ny fampiharana ary ny fikolokoloana ny mpanjifa… ary nahita vahaolana, MetaCX. MetaCX dia sehatra namboarina hiantohana ny mpividy sy ny mpivarotra hiara-miasa mangarahara amin'ny firaketana an-tsoratra, hanarahana ary hihoatra ny tanjon'ny mpanjifa.
Topimaso momba ny vokatra MetaCX
Ireo mpividy ao amin'ny SaaS sy ireo orinasa mpamokatra vokatra nomerika dia mahatsapa tsy fahatokisan-tena fa hotanterahina ny fampanantenan'ny varotra. Inona no mitranga aorian'ny sonia ny fifanarahana?
MetaCX dia nanangana sehatra iray manova ny fomba fiarahan'ny mpamatsy sy ny mpividy miara-mandresy. MetaCX dia manome habaka ifampizarana ahafahan'ny mpamatsy sy ny mpividy mamaritra sy mamaritra ny valiny miaraka, mampifanaraka ny varotra, ny fahombiazana ary ny ekipan'ny fandefasana manodidina ny tena fiatraikany orinasa hitan'ny mpanjifa.
Ny sehatra iaraha-miasa eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra dia manome:
Drafitra fahombiazana - Ataovy izay hahazoana antoka ny fanatontosana ny valin'ny asa tadiavina amin'ny alàlan'ny famoronana drafi-pandaminana iray isaky ny mpanjifa.
Templates - Mamolavola modely drafi-pahombiazana natao ho an'ny tranga fampiasana manokana sy ny personas mba hanamorana sy hamaritana ny fivarotana sy ny fahombiazan'ny vokatra.
Notifications - Ampandrenesina rehefa miditra ao amin'ny tetezana nozarainao na nifaneraseranao tamin'ny singa tetezana ny prospect na ny mpanjifa mba hahafahanao mihetsika amin'ny fotoana tena izy.
Moments - Mankalazà fotoana lehibe eo amin'ny fiainam-piainan'ny mpanjifa — fiaraha-miasa vaovao, fanatanterahana vita, ary fanavaozana natao sonia mba handinihana ny vanim-potoana mandroso.
Dingana fiainana - Mamorona drafi-pahombiazana mifanaraka amin'ny dingana rehetra androm-piainana mba hahazoana antoka fa mivory tanjona fohy sy lavitra ianao sy ny mpanjifanao.
Fanomezana tanana - Alao sary an-tsaina ny fizarana asa tanana ao anatin'ny MetaCX hahazoana antoka fa eo amin'ny pejy iray ihany ny tsirairay ary hiasa amin'ny tanjona sy tanjona iraisana.
Bridges - Asao ny mpanjifa sy ny vinavin-daharana mankany amin'ny habaka iraisana sy marika miaraka ahafahanao manoratra sy miara-miasa manodidina ny drafitra fahombiazana.
Teams - Ataovy fiainana ny traikefan'ny mpanjifa ary manomboka miara-miasa amin'ireo mpandray anjara mifandraika amin'izany amin'ny alàlan'ny famoronana ekipa olona mifanentana amin'ny dingana rehetra androm-piainana.
Fampitandremana fihazonana - Fantaro ny risika fihazonana miafina amin'ny alàlan'ny fanarahana hetsika sy fitondran-tena manokana izay manambara ny mpanjifa saika hikorontana.
Ny vokatra rehetra ao amin'ny drafitra fahombiazan'ny MetaCX dia mifamatotra amin'ireo tsangambato sy metatra izay mampiasa angona hanarahana ny zava-bita nandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa.
Ny valiny izay itadiavan'ny mpanjifanao dia hisy akony amin'ny karazan-tahiry sintominao ao amin'ny MetaCX. Azonao atao ny misintona hetsika avy amin'ny vokatrao manokana na avy amin'ny rafitra hafa, ao anatin'izany ny CRM, ny rafitra ara-bola na ny sehatra hetsika. Raha vantany vao mihinana ny zava-mitranga ao anaty sehatra amin'ny alàlan'ny fifandraisana ny rafitry ny orinasa, MetaCX dia mampiasa ny mason-tsivana sy ny fe-potoana voatondro hilazanao fa akaiky ny mpanjifa amin'ny zava-bita.
Araho ny Martech Zone Podcast amin'ny tafatafa ho an'ny resadresaka ho avy miaraka amin'ny filohan'ny MetaCX Jake Sorofman.
Vonona ny hahita ny MetaCX mihetsika? Midira androany ary hanome ekipa mivantana ny ekipa ny ekipa.
Mangataha Demo MetaCX
Tags: kpisMarketing amin'ny fiainana andavan'androdingana dinganametacxonboardingsaassaas fiainanafitantanana lifecylce saasFanamafisana ny varotradrafitra fahombiazana